Thwebula Cyberlink YouCam 7.0.0824 – Vessoft
Thwebula Cyberlink YouCam
Cyberlink YouCam – isofthiwe ukwandisa amakhono ayisisekelo of the webcam. Isofthiwe ikuvumela ukudala abalingiswa, video, amavidiyo, 3D imiphumela animated, njll Cyberlink YouCam kwenza ukuhlela izingxoxo video futhi sisebenzise nemiphumela esheshayo, ezifana ozimele, umshini, Ukuhlanekezelwa futhi nemiphumela engokomzwelo ukuze ividiyo kusuka webcam. Cyberlink YouCam Ungakwazi ukuvimba ukufinyelela kukhompyutha esimeni lapho bengatholi umsebenzisi futhi kungenziwa zibuyiswe ukuqondana kobuso umnikazi ngayo izithombe bazimisa njengesiqondiso iphasiwedi.
Khona imiphumela amaningi nokuhlunga
Ukuthuthukisa of video esuka ku-webcam yakho
Inhlangano ingxoxo yevidiyo
Iyahambisana amasevisi ethandwa
Amazwana on Cyberlink YouCam:
Cyberlink YouCam Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... WebcamMax 8.0.3.2
Ewebhu Isofthiwe ukubhekisiswa kwevidiyo ezahlukene visual effects kanye nenguquko ehlunga. Isofthiwe kuwuthinta iningi imisebenzi zokuxhumana ividiyo.
English, Français, Deutsch, 中文... WinBubble 2.0.3.7